Ny drafi-pivoarana momba ny fahaiza-manao. Ny hetsika fampiofanana mpampiasa ho an'ny mpiasa.
Posted by Tranquillus | Jul 4, 2020 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Drafitra fivoarana fahaiza-manao
Orinasa te hampivelatra ny mpiasa ao aminy ary amin'izany ny fitomboany. Afaka miorina amin'ny drafitra fampandrosoana ny fahaiza-manao. Ireto dia hetsika fiofanana maromaro izay tsy maintsy ankatoavin'ny mpampiasa ho an'ny mpiasan'izy ireo. Mifantoha amin'io fomba 4-hevitra io.
Inona no atao hoe drafi-pivoarana fahaiza-manao?
Nanomboka ny 1 Janoary 2019, lasa ny drafi-piofanana ny drafi-pivoarana fahaiza-manao. Manambatra ny hetsika fanazaran-tena ho an'ny mpiasan'ny mpiasa izy. Satria nahatratra tanjona matihanina ny hetsika fanofanana, ny departemanta tsirairay dia hanombatombana ny filàn'ny mpiasan'ny mpiasa ao aminy.
Rehefa tapitra ny fiofanana dia hahazo fahalalana sy fahalalana vaovao ny mpiasa. Ho afaka manavao na hanamafy orina ny fahalalany sy ny traikefa azony izy ireo mba hitazonana ny toerany ankehitriny na ho avy.
Ny fampandrosoana ny fahaiza-manao dia azo atao amin'ny alàlan'ny mpanazatra manokana na vondrona. Ny fivoriana matihanina amin'ny toeram-piasana na amin'ny forum dia alahatra ihany koa amin'ny ampahany amin'ny drafi-pampivoarana fahaiza-manao.
Ny fivoaran'ny drafi-pivoarana fahaizana dia tsy voatery ho an'ny mpampiasa, fa fangatahana fatratra azy io. Ity hetsika ataon'olombelona dia manampy amin'ny fampivelarana ny maha-izy azy ireo mpiasa. Raha ny marina, ny mpiasa iray mikambana ao anaty drafi-pivoarana fahaiza-manao dia ho vokatra ary mandrisika.
Iza ireo mpandray anjara amin'ny drafi-pampandrosoana fahaiza-manao?
Antoko roa no miahiahy amin'ny drafitra fampandrosoana ny fahaiza-manao:
Mety hahaliana ny orinasa rehetra izy ireo na VSE izany, SME na orinasa iray. Ny fampiharana sy fampiharana ny drafi-pampivoarana fahaiza-manao dia ny fanapahan-kevitry ny mpampiasa. Ity farany dia mety tsy hampiasa azy io raha tsy mahatsapa ny filana izy.
HAMAKY Inona no atao hoe hetra fitazonana?
Ny mpiasa rehetra, na mpitantana, mpanatanteraka na mpandraharaha, dia mety ho tafiditra ao anatin'ny drafi-pampivoarana fahaiza-manao. Izy io dia ampahany amin'ny fifanarahana ara-dalàna amin'ny asa. Raha vao misy fampandrenesana mpiasa iray momba ny fanofanana momba ny fahaiza-manao dia tsy maintsy manatrika ity farany. Mariho fa na ny mpiasa amin'ny fifanarahana maharitra mandritra ny fotoana maharitra, na amin'ny fotoam-pitsapana dia azo ampidirina ao anatin'ny drafi-pampivoarana fahaiza-manao. Fa miankina amin'ny orinasa.
Ny fandavan'ny mpiasa handray anjara amin'ny fanazaran-tena dia azo raisina ho toy ny tsy fanarahan-dalàna ka nahatonga ny fanao ratsy ho an'ny matihanina. Ny tsy fisian'ny mpiasa mandritra ny fanazaran-tena satria amin'ny fialan-tsasatra izy na amin'ny fialan-tsasatra. Mazava ho azy fa tsy misy vokany.
Ankoatr'izay, raha tsy tafiditra ao anatin'ny drafi-pampandrosoana ny fahaiza-manao ny mpiasa iray dia afaka mangataka ny fandraisana anjara izy ireo aorian'ny fanadinadinana miaraka amin'ny N + 1 (hierarchy). Ity farany dia hanamarina ny filàny amin'ny alàlan'ny tafatafa sy fanombanana.
Ny mpiasa dia mitazona ny zony rehetra mandritra ny fiofanana. Ny valim-pitondrany sy ny tombontsoany dia tsy miova. Raha misy tranga mitranga mandritra ny fiofanana dia hanjary ho lozam-piasana izany.
Ny mpiasa tsy eo mandritra ny fiofanana dia mety hahazo tombony amin'ny fotoam-pitsaboana raha toa ka voamarina ny tsy fisian'izy ireo. Toy ny fitsaharana ara-pitsaboana, ny hopitaly na ny filan'ny fianakaviana. Miala, na dia ny drafitra sy ny fialan-tsasatra manokana aza dia tsy tafiditra ao anatin'ny tsy fiantrana amin'ny tsy fahampian'ny fiofanana amin'ny fampandrosoana.
Ahoana ny fomba hametrahana drafi-pivoarana fahaiza-manao?
Ny famolavolana drafitra fivoarana fahaiza-manao dia manamora ny fampitana ny fampiofanana. Ny fampiharana azy dia manomboka amin'ny famitana ny filàna fiofanana.
HAMAKY Iza no mahazo tombony amin'ny fiatoana amin'ny asa mifandraika amin'ny fanakatonana ireo sekoly? Raha manan-jo handoa azy ianao, manao ahoana ny habetsaky ny fotoana sy ny tambin-karama?
Ohatra: ianao no mpitantana ny serasera, ny mitantana serasera anatiny sy ivelany no asanao. Mila fiofanana amin'ny fifandraisana nomerika ianao hanatsarana ny lazan'ny orinasanao. Raha vaovao aminao io lohahevitra io na raha misy fotokevitra vitsivitsy hianaranao bebe kokoa. Mila fiofanana amin'ny fifandraisana nomerika ianao.
Ny N + 1 dia mandefa ny fangatahana amin'ny ambaratongam-pahefana amin'ny endrika antontan-taratasy. Tsy maintsy ampidirina ny sanda fanampiny, ny fiatraikany ary ny faharetan'ny fampiofanana ho an'ny orinasa. Aorian'ny fanamafisana ny ambaratongam-pahefana dia handeha amin'ny loharanon'olombelona ny fangatahana, izay hitady ny mpamatsy serivisy hanatanteraka ny fampiofanana. Ny fiofanana dia mety hatao ao anatiny na ivelan'ny orinasa. Ny vola dia ho entin'ny mpampiasa.
Amin'ny faran'ny fampiofanana dia hatolotra anao ny tombana mivantana ny zava-bita. Izany dia hamaritra ny haavon'ny fahaiza-manao azonao an-tsaha. Ho fanampin'izay, hisy fanombanana fahaiza-manao koa ho tanterahana mba hanombanana ny valiny. Ity hetsika ity dia tanterahina mandritra ny vanim-potoana fanombanana araka ny kalandrie an'ny orinasanao. Amin'ny ankapobeny, ny rafitra vita endrika ara-dalàna dia manao tombana amin'ny fahaiza-manao isaky ny telovolana na indroa isan-taona.
Ny drafi-pampandrosoana ny fahaiza-manao dia tsy maintsy mitarika vokatra azo tsapain-tanana ho an'ny orinasa. Ho fanampin'ny fahafantaran'ny mpiasa, ny rafi-pananganana dia tsy maintsy mampitombo ny lazan'ny tambajotra sosialy.
Ahoana ny fomba hamantarana fa ny drafi-pampandrosoana fahaiza-manao dia nahomby?
Mpitarika maro no tsy mahatsapa ny mahomby amin'ny drafi-pampivoarana fahaiza-manao. Izany angamba no iray amin'ireo antony. Ny rafitra sasany dia tsy mihevitra fa ilaina ny fandefasana fiofanana ho an'ny mpiasa ao aminy. Mihevitra izy ireo fa amin'ny alalàn'ny fianarana amin'ny asa dia havoatra ho azy manokana ny fahaiza-manao.
HAMAKY Ny kaonty fampiofanana manokana (CPF)
Na izany aza, marika fampisehoana maro dia azo refesina amin'ny alàlan'ny fampiharana ny hetsika fampiofanana. Raha mandray ny ohatry ny tompon'andraikitry ny serasera izay efa nanofana tamin'ny Community Management ohatra isika. Nahazo fahaiza-manao maro ny mpandray anjara, toy ny fanao amin'ny marketing inbound, fandalinana fikarohana ary ny fifehezana ny fitaovana nomerika. Anisan'ny zavatra azonao atao ny mahatsapa ny antony manosika anao sy ny fahatsapanao azy.
Ny zavatra tsara indrindra atao mba hahazoana vokatra tena. Karazana manaporofo ny fahaizanao mialoha izany. Ary izany, na inona na inona saha. Raha ao anatin'ny enim-bolana manaraka, ianao irery no manao fiofanana. Momba ny fananganana ireo karazana dashboards ao amin'ny Excel. Avy eo raha vantany vao mivoaka ny fotoana dia manolotra anao amin'ireo mpiara-miasa aminao. Na ny lehibenareo, tabilao fanaraha-maso lehibe. Mazava fa rehefa mangataka fiofanana amin'ny Excel ianao. Tsy hisy hisalasala ny mahasoa an'io fiofanana io. Ny fahaizanao efa naseho. Izy io dia fotsiny hoe fomba tsotra fotsiny. Ny mety anao hampitombo ny fahaizanao.
Ny drafi-pivoarana momba ny fahaiza-manao. Ny hetsika fampiofanana mpampiasa ho an'ny mpiasa. Jolay 2, 2020Tranquillus
Teo alohaTetikasa famadihana matihanina
manarakaFanavaozana ny Reconversion na fampiroboroboana ny fianarana momba ny asa (Pro-A).
Ahoana no hamoronana ny asanao manokana sy hahaleo tena?